Adama Traore oo laga helay COVID-19… (Miyaa laga reebay qaranka Spain?) – Gool FM
(Madrid) 01 Seb 2020. Dhammaan xubnaha ku jira safka xulka qaranka dalka Spain ayaa laga baaray xanuunka dunida ragaadiyay ee Korona Fayras kaddib markii ay soo gaareen xerada tababarka ee Las Rozas, iyo si la mid ah inta aysan immaanba.
Adama Traore ayaa laga reebay safka xulka La Roja kaddib markii laga helay COVID-19, waxaana uu noqday xiddigii labaad ee ku jira safka Macallin Luis Enrique kaasoo laga helay xanuunkan kaddib laacibka kooxda Real Sociedad ee Mikel Oyarzabal.
Xiddigan ayaanan ka qayb noqon doonin xiddigaha xulka u matalaya ciyaaraha tartanka UEFA Nations League ee ay la kala ciyaarayaan waddamada Germany iyo Ukariane, si loo raaco xeerka xaddidaadda UEFA ee la xiriira xanuunkan.
Weeraryahanka Wolves ayaa tani ay ku noqoneysaa dhabar jab kale isagoo dhaawac ku seegay markii ugu horreysay ee qaranka waaweyn loogaga yeeray bishii Nofeembar ee sanadkii hore.
24-jirkan ayaa baaritaan kale mari doona maanta, waxaana haddii baaritaankan natiijadiisa ay noqoto in laga waayo xanuunkan, uu ku laaban doono tababarka qaranka Spain.
ESM oo shaacisay kooxda ugu wanaagsan sanad ciyaareedkii tagay ee 2019/20